पतिका लागि भाग्यशाली हुन्छन् यस्ता पत्नी,विवाहपछि बनाइदिन्छन् धनवान। |
पतिका लागि भाग्यशाली हुन्छन् यस्ता पत्नी,विवाहपछि बनाइदिन्छन् धनवान।
November 21, 2021 November 21, 2021 adminLeaveaComment on पतिका लागि भाग्यशाली हुन्छन् यस्ता पत्नी,विवाहपछि बनाइदिन्छन् धनवान।
काठमाडौँ । महिलालाई लक्ष्मीको रुप मानिने गरिन्छ। जुन स्त्री भाग्यमानी हुन्छन्, उनीहरुले पतिलाई हर सुख दिने गर्छन्। त्यस्तै समुद्रशास्त्रमा पनि स्त्रीका बारेमा खास कुरा बताइएको छ।जसका अनुहार आज हामी तपाईलाई कुन कुन स्त्री निकै भाग्यशाली हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछौँ । पतिका लागि निकै शुभ मानिन्छन् यी राशिका महिला :समुद्रशास्त्रमा जुन महिलाको कपाल लामो र बाक्लो छ, त्यस्ता महिलालाई निकै भाग्यमानी मानिन्छ। यस्ता स्त्री आफ्ना पतिका लागि लक्की चाम हुने गर्छन्।
विवाहपछि यिनीहरुले आफ्नो पतिलाई सौभाग्य लिएर आउने गर्छन्।समुद्रशास्त्रमा लामो र सर्लक परेको खुट्टा भएकी स्त्रीलाई पनि निकै भाग्यमानी मानिन्छ। यस्ता महिलालाई कहिलै पनि पैसाको कमी हुँदैन्। विवाहपछि यस्ता स्त्रीले पतिलाई पनि धनवान बनाउने गर्छन्।जुन महिलाको हात अन्य महिलाको तुलनामा लामा छन्, त्यस्ता महिला पनि निकै भाग्यमानी हुने गर्छन्। जुन घरमा यिनीहरुको विवाह हुन्छ, त्यो घरमा कहिलै धन सम्पत्तिको कमी हुँदैन्।
यो पनि पढ्नुहोस:हिन्दु धर्ममा वास्तु शास्त्रको विशेष महत्व छ । हाम्रा वरपर भएका कुराहरुले जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।सामान्यतया मानिसहरु आफ्नो पर्समा पैंसासँगै अन्य अतिरिक्त धेरै कुराहरु राख्छन् । वास्तु शास्त्रमा धेरै चीजहरुबारे वर्णन गरीएको छ ।पर्समा केही चीजहरु राख्नु अशुभ मानिन्छ । वास्तु शास्त्रमा वर्णित कुराहरुका अनुसार, पर्समा पैंसाबाहेक अतिरिक्त धेरै कुराहरु पर्समा राख्दा आर्थिक संकट आउन सक्छ ।पर्समा तल दिइएका निम्न कुराहरु राख्दा आर्थिक संकटसँगै अन्य समस्याहरु पनि आउने गर्छन् ।
१. भगवानको फोटो:वास्तु शास्त्र अनुसार कुनै पनी भगवानको फोटो पर्समा राख्नु हुदैन । यो विश्वास गरिन्छ कि पर्समा भगवान को फोटो राख्दा एक व्यक्ति ऋणको बोझ बोक्न सक्छ र धेरै बाधाहरु उसको जीवनमा आउन सक्छन् ।२. मृत आफन्तहरुको फोटो:मृत आफन्त वा परिवारको फोटो पर्समा कहिल्यै राख्नु हुदैन । वास्तु शास्त्रमा यसलाई अशुभ मानिन्छ । यस्तो गर्नाले मानिस विभिन्न खालमा आर्थिक समस्याहरुबाट गुज्रनुपर्छ ।
३. चाबी:वास्तु शास्त्र अनुसार, चाबी पनि पर्समा राख्नु हुँदैन् । शास्त्र अनुसार पर्समा चाबी राख्दा जीवनमा नकारात्मकता आउँछ । पर्समा चाबी राख्दा आर्थिक संकटको समाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।४. पुरानो बिल:मानिसहरुको खरीदारी पछि बिल आफ्नो पर्समा राख्ने गर्छन् । वास्तु शास्त्र अनुसार पुरानो बिल पर्समा राख्नु शुभ हुँदैन् । यस्ता मान्छेहरुमाथि लक्ष्मी माताको कृपा रहँदैन भन्ने विश्वास गरीन्छ ।
पर्समा भुलेरपनि नराख्नुहोस् यी ४ चीज,बेवास्ता गरे भएको पनि सबै सम्पति स्वाहा हुनसक्छ।
घरमा कमिलाको ताँती देख्नुभएको छ भने,चिनी खुवाउनुहोस।नसोचेको यस्ता लाभ हजुरको घरमा प्रवेश गर्नेछन।एकचोटी पढेर धेरैलाई थाहा नभएको कुराको जानकारी लिनुहोस्
पत्याउन गार्हो हुने यी युवतीलाई यति सम्म गरेर एक प्रेमी फरार,पुरा पढ्नुहोस र होसियार रहनुहोस
BREAKING NEWS:हिजो बढेको सुनको मुल्य,आज शुक्रवार अपत्यारिलो तरिकाले ह्वात्तै घट्यो